हिरोइन बजारभरी, तर किन खडेरी ? – Mero Film
हिरोइन बजारभरी, तर किन खडेरी ?
२०७५ वैशाख २६ गते ११:२७
कलाकारहरू सस्तो बन्दा, स्टारडम बनाउन नसक्दा, एकाध फिल्म खेल्ने वित्तिकै नखरा देखाउन थाल्दा उनीहरूलाई मेकरले लिन हच्किएका छन् । अझ केही हिरोइनले सुटिङमा ब्वाइफ्रेन्डसमेत लिएर जाने र उनीहरुको समेत खर्च ब्यहोर्नु पर्ने तनावले निर्माता पुरानाको साटो नयाँ हिरोइनको खोजीमा लाग्ने गरेका छन् ।
फोटोमा दाँयाबाट क्रमस : चलचित्र पत्रकार सुशील पौडेल, नायिका \_निर्देशक झरना थापा, निर्माता\_कलाकार दिपक राज गिरी, निर्माता केशब भट्टराई
अभिनेत्री झरना थापाले नयाँ फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ बनाउने तयारी थाल्दै गर्दा नयाँ अभिनेत्री खोज्न थालेकी छिन् । हिरो को लिने भन्ने चिन्ता त झँदैछ तर त्योभन्दा बढी फिक्रि हिरोइन कै छ । अभिनेत्री सम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई नदोहोर्याएर थापा दम्पत्ती किन नयाँ हिरोइन खोजीमा लागेका होलान् ?
निर्माता दीपकराज गिरीले पनि लामै समय अभिनेत्रीको खोजी गरे । दिमागमा धेरै अप्सन राख्दै उनले फिल्म ‘छक्का पन्जा ३’का लागि अभिनेत्री खोजे । तर, अभिनेत्री पाउन मुश्किल भयो । अन्तत, उनले फिल्म ‘ऐश्वर्य’की डेब्यू हिरोइन दीपिका प्रसाईंलाई मुख्य भूमिकामा अनुवन्धित गरे ।
अभिनेता तथा निर्माता भुवन केसीले फिल्म ‘क्याप्टेन’का लागि लामै समय लगाएर हिरोइन खोजे । अभिनेता अनमोल केसीले यसअघि पनि नयाँ अभिनेत्रीसँग मात्रै काम गर्दै आएका छन् । आफैंले ५-५ हिरोइनसँग काम गरे पनि छैटौं फिल्ममा पनि अनमोललाइ उनलाई नयाँ हिरोइन नै चाहियो । आफूसँग एउटा मात्र फिल्ममा काम गरेका अभिनेत्री उनका लागि लायक भएनन् । यो फिल्ममा अनमोलले उपासनसिंह ठकुरी र प्रियंका एमभीसँग रोमान्स गर्दैछन् ।
फिल्म ‘रोजी’का लागि निर्देशक निरक पौडेल र अभिनेता प्रदिप खड्काले पनि लामै समय लगाएर नयाँ अभिनेत्री खोजे । तर, फिल्म छायांकनमा जाने समयमा पनि फ्रेस अनुहार नपाएपछि निरक र प्रदिपले परमिता आर एल राणालाई फाइनल गरेका हुन् ।
फोटोमा दाँयाबाट क्रमस : नायिकाहरु श्वस्तिमा खड्का , निर्मात्री/नायिका रिचा शर्मा , पुजा शर्मा , आचल शर्मा
हिरोइन खोज्न सकस बेहोर्ने यी त केही प्रतिनिधी नाम मात्र हुन् । छैननभन्दा बजार भरी हिरो हिरोइन छन् तर काम गर्ने बेलामा कोही भेटिन्नन् । फलतः निर्माता निर्देशक काठमाडौंका हरेक चोकमा नयाँ नयाँ हिरोइन खोजिरहेको भेटिन्छन् ।
फिल्म ‘यात्रा’का लागि पुराना निर्माता केशव भट्टराइले अभिनेत्री बर्षा राउतलाई फाइनल गरे । तर, बर्षा पछि यो फिल्ममा भइनन् । केही समय लगाएर नयाँ अभिनेत्री खोजियो र मल्लिका महतलाई फाइनल गरियो । अभिनेता सलिनमान बनियाँका लागि नयाँ अभिनेत्री खोज्न केशवलाई मुश्किल नै भयो ।
नेपाली फिल्मका चर्चित ब्यानरलाई पनि अहिले फ्रेस अनुहार खोज्नु परिररहेको छ । तर, उनीहरु फ्रेस अनुहारकै पछाडि किन दौडिएका होलान् ?
निर्माता केशव भट्टराईले ‘यात्रा’को केसमा भने हिरोका कारण हिरोइन भेट्न झन्झट भएको बताए । ‘सलिनसँग जोडी सुहाउने स्थापित हिरोइनको समय नमिलेकोले नयाँ खोजेको हो । यसमा कास्टिङ निर्देशकको पनि नयाँ राखौं भन्ने जोड थियो,’ उनले भने । भट्टराईले स्थापित हिरोइन सीमित भएकाले पनि निर्माता नयाँको विकल्पमा लागेको उनले बताए । ‘चलेका थोरै छन् तर सबै बिजी छन्,’ उनको तर्क छ ।
अभिनेत्री निर्देशक झरना थापा भने नयाँ अनुहार लिएर आउँदा मानिसमा कौतुहलता हुने भएकाले नयाँको खोजी भएको हुन सक्ने अनुमान गर्छिन् ।
‘मैले मेरो फिल्ममा नयाँ जोडी बनाउन लागिरहेको छु । कारण मान्छेमा यसले कौतुहलता पैदा गरोस् । सायद अरु निर्माताको पनि सोच यही होला । यसका लागि कसैले हिरो नयाँ खोज्छन् त कसैले हिरोइन,’थापाले भनिन् ।
फोटोमा दाँयाबाट क्रमस : नायिकाहरु प्रियंका कार्की , केकी अधिकारी, सम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह, नम्रता श्रेष्ठ , दिपिका प्रसाईं
नेपाली फिल्ममा अभिनेत्रीहरुको संख्या गन्ने हो भने लामो सूची निस्कन्छ । अभिनेत्री नै अभिनेत्रीले भरिएको फिल्म बजारमा फिल्म बनाउँदा भने निर्माताको नजर उनीहरुमा हैन, नयाँमा केन्द्रित छ ।
नेपाली फिल्मका मेकरहरुले पुराना वा एउटा फिल्म खेलेका अभिनेत्रीलाई पनि विश्वास गर्न सकेका छैनन् । आखिर किन निर्माता र हिरोइनबीच दूरी बढेको छ ? पत्रकार सुशील पौडेल फिल्मको बदलिँदो संरचनालाई मुख्य कारण मान्छन् ।
उनको तर्क छ, ‘बजारमा मौजुद नायिकाहरूले आफूलाई स्थापित गर्न नसक्नु पहिलो समस्या हो । दोस्रो चाहिँ फिल्मको पटकथा पनि कारण हो । पहिले जस्तो अब हिरोइन केवल सो पीस मात्रै रहेनन् । फिल्मका पटकथाले अचेल बलियो चरित्र भएका हिरोइन जन्माउने जमर्को गरिरहँदा निर्माता र निर्देशकले पनि चरित्र बोक्न सक्ने हिरोइनको खोजी गर्न थालेका छन् । त्यसैले पनि चलिआएका ‘टाइप कास्ट’ हिरोइनभन्दा अभिनयमा पोख्त नायिकाको खोजी भएको हो ।’
नायिकाहरू प्रायः एकाध फिल्म खेलेपछि अप्ठ्यारा हुने गरेको आरोप पनि निर्माता र निर्देशकको हुने गरेको छ । पौडेल पहिलो फिल्मबाटै स्टार भएँ हिरोइनको एटिच्युड पनि निर्मातालाई बिझाएको हुन सक्ने धारणा राख्छन् । ‘पुराना नायिकाले आफू अनुकुल सहज नभइदिने भएर पनि नयाँमा आँखा लगाएको हुन सक्छ । पुराना नायिकाले प्रचारको समयमा साथ नदिँदा पनि धेरै निर्मातामा नयाँ हिरोइन लिएर ढुक्कसँग काम गर्ने सोच बढेको छ ।’
फोटोमा दाँयाबाट क्रमस : नायिकाहरु अनु शाह , अशिश्मा नकर्मी, वर्षा राउत , शिल्पा पोखरेल
नयाँको ग्ल्यामर सधैं र सबै सेक्टरमै हुन्छ । दर्शकलाई नयाँ स्वाद दिन पनि नयाँको खोजी हुने गरेको छ । अझ दक्षिण एसियाको समाजमा पुरुष जति बुढो भए पनि पुरानो नहुने तर महिला चाँडै पुरानो मान्ने मनोविज्ञान छ । राजनीतिदेखि फिल्मसम्ममा पनि यही मनोविज्ञानले काम गरेको छ । बलिउडमा शाहरुख खान, सलमान आफूभन्दा आधाभन्दा कम उमेरका नायिकासँग अझै काम गरिरहेका छन् तर उनीहरुका समकालीन अभिनेत्री बच्चाको विवाह गर्ने सुरसार गर्दैछन् । पहिलो फिल्मबाटै राम्रो स्टारडम बनाउन सक्ने अभिनेत्रीलाई कामको अभाव छैन । तर, जो पहिलो फिल्ममा खासै नोटिस हुँदैनन् उनीहरुलाई लिन मेकरहरु नाक खुम्च्याउँछन् । एउटा फिल्म खेलिसकेपछि अभिनेत्रीहरुले पारिश्रमिक बढाउनु, समय दिन किचकिच गर्नु, डिमान्ड धेरै गर्नु आदि कारणले निर्माता पुरानोको साटो नयाँको विकल्पमा लाग्ने गरेका छन् । आखिर, धेरै पारिश्रमिक दिएर पुरानालाई लिएर पनि फाइदा नहुने भएपछि मेकरहरु फ्रेस अनुहार खोज्नमा बढी आकर्षित भएका हुन् ।
दीपकराज गिरी भने हिरोइन मात्र होइन सबै खाले कलाकारमा निर्माताहरुले विकल्प खोजिरहेको बताए । उनले कलाकारले ब्यानर र एकल निर्मातालाई एकै खालको व्यवहार गर्दा पनि समस्या आइरहेको औंल्याए । ‘ हामीसँग च्वाइस कम छ । हिरोइनमा तपाईं प्रियंका, केकी र साम्राज्ञीबाहेक अर्को भेट्नु हुन्न । अनि ब्यानरले फिल्म बनाउँदा कलाकारबाट आफ्नै खाले अपेक्षा गरेको हुन्छ । किनकि ब्यानरको फिल्ममा कलाकारलाई दिने पैसा ज्यादा हुन्न । कलाकारको पैसा थोरै काटेर हामीले मेकिङमा खर्च गर्छौं । यो कुरामा पनि कलाकार र मेकरको कुरा मिल्दैन । हामी नयाँमा जान बाध्य हुन्छौं,’ गिरीले भने ।
फोटोमा दाँयाबाट क्रमस : नायिकाहरु वर्षा सिवाकोटी, नम्रता सापकोटा, बेनिशा हमाल, निता ढुंगाना
सकिएको हो त धेरैको करिअर ?
बजारमा अभिनेत्रीहरु धेरै छन् । तर, धेरैले काम नै पाएका छैनन् । काम पाए पनि उनीहरुले खासै चमत्कार गर्न सकेका छैनन् । प्रियंका कार्की, साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई लिन निर्माताहरुले नाक खुम्च्याएका छैनन् । तर, प्रियंकाले पनि धेरै फिल्म खेल्दा उनी खाली ठाउँ भर्ने बाहेक अन्य काम गर्न सकेकी छैनन् ।
नम्रता श्रेष्ठ, नीता ढुंगाना, नम्रता सापकोटा, अनु शाह, अशिष्मा नकर्मीदेखि अन्य थुप्रै अभिनेत्रीहरुको समय अब विस्तारै गुज्रिन थालेको छ । उनीहरुलाई राम्रा मेकरले पत्याएका छैनन् । कतिपयले मेकरसँगको निकटताले काम पाइरहेका छन् भने कतिपय विकल्प नभएर काम पाइरहेका छन् ।
यसो भन्दै गर्दा फिल्म क्षेत्रमा अवसर छैन भन्ने होइन । फिल्म क्षेत्रमा अभिनेता र अभिनेत्री दुबैका लागि प्रशस्त अवसर देखिएका छन् । बर्षमा सयको हाराहारीमा फिल्मबन्दा कलाकारलाई काम पाउन मुश्किल छैन ।
तर, कलाकारहरू सस्तो बन्दा, स्टारडम बनाउन नसक्दा, एकाध फिल्म खेल्ने वित्तिकै नखरा देखाउन थाल्दा उनीहरूलाई मेकरले लिन हच्किएका छन् । अझ केही हिरोइनले सुटिङमा ब्वाइफ्रेन्डसमेत लिएर जाने र उनीहरुको समेत खर्च ब्यहोर्नु पर्ने तनावले निर्माता पुरानाको साटो नयाँ हिरोइनको खोजीमा लाग्ने गरेका छन् ।